isivumelwano: kuvulwe kwi & t lg v20 kwintengiso engaphantsi kwe- $ 300 kwi-ebay
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Idili: Kuvulwe i-AT & T ye-LG V20 kwintengiso engaphantsi kwe- $ 300 kwi-eBay
Idili: Kuvulwe i-AT & T ye-LG V20 kwintengiso engaphantsi kwe- $ 300 kwi-eBay
Ii-LG kunye neeapos zonyaka ophelileyo, i-V20 iyathengiswa kwakhona e-United States. Ukuba & apos ubulandela iindaba malunga Izivumelwano zeLG V20 , ke uyazi ukuba i-smartphone ayikaze ifumaneke ukuze ithengwe ngaphantsi kwe- $ 300.
Ewe, kujongeka ngathi inkampani ngoku ithengisa ingxelo engavulwanga ye-LG V20 nge- $ 290 nje kwi-eBay. Nangona i-smartphone idweliswe ngexabiso eliphezulu ($ 340), abathengi banokugcina i-20% eyongezelelweyo ngokusebenzisa ikhowudi yesaphulelo ekuphumeni (PCOLUMBUS2017).
Gcina ukhumbula ukuba le yimodeli ye-AT & T LG V20 (H910A), ke iya kusebenza kuphela kwinethiwekhi ye-GSM e-US (uxolo, akukho Sprint okanye iVerizon). Kwakhona, iTitan kuphela kombala onokukhetha ukuwuthenga kwi-eBay.
Ukujonga i- I-LG V20 isathengisa e-US malunga ne-500 yeedola ngokuthe ngqo, wena kunye ne-apos; uzakonga kakhulu ngokufumana i-eBay nge $ 290 - 42% ukuze ichaneke ngakumbi. Logama nje u-odola i-smartphone ngaphakathi e-US, uza kufumana ukuhanjiswa simahla.
umthombo: eBay nge AndroidPolice
cima ukutshaja ngokukhawuleza s6
Java uguqula umtya ube yi-int
Iqhosha lamandla alisebenzi kwi-android
Ixabiso le-Samsung Galaxy S6 kunye ne-S6 Edge kunye nomhla wokukhutshwa
Isamsung inokuyeka ukuthengisa i-Galaxy Note 10 nje ukuba kuphume iNqaku 20
Ukuseta kunye nokwenza isebenze kwi-eSIM ngesicwangciso seVerizon kwi-SIM-X ye-iPhone XR, XS okanye eMax
Ngoku ungagcina ii-tweets njengoyilo kwaye uzicwangcisele ixesha elizayo
Ungazongeza njani ii-emoticons / i-emoji kumagama efolda kwi-Android
I-Samsung Galaxy S7 vs HTC One M10 Perfume: ukuthelekiswa kwangaphambili kweempawu
I-Apple iya kuthatha indawo yeeyunithi ezonakalisiweyo ze-iPhone 6 Plus nge-iPhone 6s Plus ukuya ngoMatshi
Amaxabiso e-Samsung Galaxy S6 ukuqala kwi-699 euros eYurophu, umda we-S6 128 GB unokubiza i-1,049